Hetsika Skate & Style tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Munich
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena » Hetsika Skate & Style tonga any amin'ny seranam-piaramanidina Munich
Aprily 9, 2019
Skateboarding matihanina amin'ny sidina ambony dia mahavariana. Amin'ny hetsika Skate & Style vaovao, izay tonga eto amin'ny seranam-piaramanidina Munich, dia ho hitan'ny mpijery ny fisehoan'ny fika sy ny fitsambikinana ary ny fitsambikinana. Manomboka amin'ny 24 ka hatramin'ny 28 aprily, ny Forum MAC an'ny seranam-piaramanidina dia hivadika ho toerana mafana amin'ny skateboarding rehefa mandray ny fiadiana ny tompondakan'i Alemana atsimo amin'ity fanatanjahan-tena mahaliana ity.
Amin'ny fiadiana ny amboaran'ny Club of Skaters (COS), sokajy telo no hiatrehan'ny mpifaninana, ka ireo mendrika no hiatrika ny famaranana nasionaly amin'ny faran'ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny Europapark Rust, ilay kianja filalaovana lehibe indrindra any Alemana. Ireo mpijery amin'ny Skate & Style izay miatrika fanamby dia raisina ihany koa handray tabilao sy hizaha ny fahaizany manokana amin'ny velaran-tany 800 metatra toradroa.
Ny hetsika mandritra ny efatra andro dia hanasongadinana zavatra maro, ao anatin'izany ny programa fialamboly sy hetsika mahafinaritra. Raha mijery ny mpankafy, hanafika ny arabe sy ny sakana ny elitika alemana amin'ny skateboarding ary hampiseho ny hetsika tsara indrindra vitany Ary eo anelanelan'ny fihodinana amin'ny fiadiana ny amboara COS 2019, dia hiatrika lohany ny maherifo ao an-toerana amin'ny fiadiana ny Tompondakan'i Titus Locals Only (LOC).
Ny fisoratana anarana ho an'ny mpifaninana COS sy LOC dia hatao mandritra ny fotoam-pivarotana voalohany amin'ny zoma 27 aprily.
Ny asabotsy manomboka amin'ny 1 ora tolak'andro dia hafana ny raharaha rehefa manomboka miady toerana amin'ny famaranana ireo mpandray anjara. Hotontosaina ny alahady manomboka amin'ny 11 ora maraina ny dingana manasa-dalana sy farany. Alohan'ny lanonana loka dia misy manintona manokana miandry amin'ny 5 ora hariva: ny Ravenol Barrel Jump. Amin'ity fitsapana ny fahaiza-manao ity, ny skateboarders dia mihazakazaka mankany amin'ny laharana barika, mitsambikina amin'ny segondra farany, ary manandrana manao fiakarana madio amin'ny solaitrabe miorina amin'ny faran'ny hafa.
Mandritra ny efatra andro amin'ny hetsika, hisokatra ny tanin'ny valan-javaboary tsy ho an'ny mpifaninana ihany, fa ho an'ny mpandeha sy ny mpitsidika seranam-piaramanidina izay te hanandrana ity fanatanjahan-tena mahaliana ity. Isan'andro manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva, Skate & Style dia hampiantrano fivoriana malalaka sy atrikasa malalaka, miaraka amin'ireo mpampianatra hanome torolàlana ho an'ny parcours na miniramp. Ny skateboards, ny aroloha ary ny pads dia azo indramina tsy andoavam-bola. Ireo mpitsidika ny Skate & Style dia afaka mijanona maimaimpoana mandritra ny dimy ora ao amin'ny fijanonan'ny fiara P20.